Cheap Jerseys Cheap NFL Jerseys Cheap NFL Jerseys Cheap Football jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale Jerseys Cheap NHL Jerseys Cheap Jerseys From China Cheap MLB Jerseys Cheap Jerseys Cheap Jerseys Cheap Jerseys Wholesale Jerseys भुइँमान्छेको कथा | काव्यालय
भुइँमान्छेको कथा | कथा | काव्यालय - Kavyalaya | कृष्ण कञ्चन
by कृष्ण कञ्चन कार्तिक ८, २०७७
– “भाइ एक्लै बस्छु भन्दै थियौ त कोठामा कसलाई लिएर आयौ ? दुईजना बसेपछि भाडामा पनि हेरफेर गर्नुपर्छ है ?”
– “किन हल्ला गरेको भाइ?सानो आवाजमा सुन्न सक्दैनौ गीत? जतिबेला पनि गिटार बजाएर हल्ला गर्नुपर्छ तिमीलाई ?”
– “भाइ पानी सकिएछ त हिजै मैले ५००० हजार लिटरको ट्याङ्की भरेको थिएँ । रातभर धारा खुल्लै छोड्यौ कि के हो?”
-” कहाँ गएका थियौ भाइ यति अबेरसम्म ? सात बजे नै गेट बन्द हुन्छ् भन्ने तिमीलाई थाहा छैन ?”
– “के पकाएको भाइ खार आएर हामीलाई नै गाह्रो भयो?”
– “माछा, मासु र रक्सी कोठामा खान मिल्दैन, तिमीलाई पहिले नै भनेको हैन यो कुरा ? हामी शुद्ध ब्राह्रामण हौँ भनेर !”
– “भाइ भाडा समयमा दिनु पर्दैन आज ४ गइसक्यो त !”
-“बत्तीको बिल खै ?”
– “पानीको बिल खै?”
-“फोहोरको पनि पैसा दिनुपर्छ है?”
तपाईं पनि मजस्तै काठमाण्डौँको डेरावाल हो भने यी र यस्ता कुरा सुन्ने बानी भइसकेको होला । यदि नभएको भए बिस्तारै बानी हुनेछ । केही अपवादमा भेटिने घरबेटीहरूको लागि भने यो गन्थन हैन ।
घर फेरे पनि यहाँका घरबेटीका व्यवहार नफेरिने रहेछन् । बिरालोले बच्चा सार्दै हिँडे जसरी सर्न पनि नसकिने रहेछ । काठमाण्डौँमा घर भएका मान्छेले काठमाण्डौँमा घर नभएका मान्छेलाई मान्छे नै नभन्दा रहेछन् । मान्छेको जस्तो व्यवहार नै नगर्दा रहेछन् ।
तपाईं हामी यस्तै व्यवहार झेल्दै बाचेका छौँ नि है? साधारण दैनिकी हुँदा नै यस्ता तिखा प्रश्न सधैँजसो गर्ने घरधनीले यो ६ महिनाको अवधिमा केके प्रश्न गरे होलान्? कति प्रश्न गरे होलान्? के के बित्यो होला मजदूरी गरेर पेट पाल्ने डेरामा बस्ने परिवारको जीवनमा ।
२०७७ चैत्र ११ बुधबार
सरकारले औपचारिक रूपमा लकडाउनको घोषणा गर्दै थियो । भोलिदेखि लकडाउन हुने भएकाले केही जोहो आजै गर्नु थियो मैले । खल्तीमा हेरेँ चार सय पचास रूपैयाँ रहेछ जम्मा । पाँच केजी चामल, दुई केजी आलु, एक लिटर तेल किनेँ, केही अपुग पैसा उधारो खातामा लेख्न लगाएँ । सधैँ कारोबार गर्ने भएकाले कहिलेकाहीँ उधारो पनि दिने गर्छन् पसलेले ।
बाटोमा मान्छेहरूको चाप थियो । मोटरहरू हतारमा हुइँकिएका थिए । चैत्रमासको दिउँसोको प्रचण्ड गर्मी बिस्तारै सेलाउँदै गएको थियो । घाम डुबेर झिसमिसे हुँदै थियो । मान्छेहरूको मनमा त्रास थियो । सिङ्गो विश्‍व नै महामारीको भयले आक्रान्त थियो ।
रिङरोड पार गरेपछि करिब दुईसय मिटरको दूरीभित्र मेरो डेरा छ । डेरा मात्र हैन मेरो संसार । जहाँ मेरी ५ वर्षिया छोरी र श्रीमती पनि छन् ।
पहाडमा हलगोरूले बिहानभरि जोतिसक्ने घरसँगै जोडिएको घरबारी छ सम्पत्तिको नाममा । तीन महिना खान पनि पुग्दैन जसले । त्यसैले छोरीको पढाइको लागि भनेर भएपनि हामी आजभन्दा ६ वर्ष अगाडि काठमाण्डौँ पसेका थियौँ ।
कोठामा सामान केही ठिक ठाउँमा छैनन् । किताब कापी छरिएका छन् छोरीका । भाँडाकुँडी पनि यत्रतत्र छन् । छोरी यसैमा भुलिरहेकी छन् । “जति सामान मिलाएर राखे पनि छोरीले तितरबितर बनाउँछे । “ भन्दै श्रीमतीले गुनासो गर्छिन् बेलाबखत । “छोड्देऊ खेल्ने ठाउँ नै गाउँको जस्तो आँगन कहाँ छ र यहाँ? आँगन भने पनि घर भनेपनि जे भनेपनि यही एउटा कोठा त हो हाम्रो, खेल्न देऊ । ” भनेर भन्ने गर्छु उनीलाई मैले ।
कोठा भान्सा बनेको छ । छोरी खेल्ने आँगन बनेको छ । आरामा गर्ने सुत्ने बस्ने स्थान पनि बनेको छ । एकछेउमा पानीको जार छ । अर्को छेउमा झोलामा खाँदिएका छन् कपडाहरू सँगै चामलको बोरा पनि छ । ढोकाको भित्रपट्टि काँटि ठोकिएका छन् जहाँ केही कपडाहरू झुण्डिरहेका छन् । झ्यालपट्टि खाना पकाउने ठाउँ छ । जहाँ खाना पकाउँदै छिन् उनी । छोरी भुइँमा सामानहरू असरल्ल पारेर खैल्दैछिन् । कुनामा २१ इन्चको पुरानो टिभी रहेको छ । जो उनको दिन कटाउने साथी बनेको छ । छोरीको लागि खुशी पनि यहि नै हो । सधैँ जसो कामबाट फर्किएपछि म पनि हेर्ने गर्छु । आज कामबाट फर्किनासाथ मैले टिभी अन गरेँ सामाचार हेर्नु/सुन्नु थियो मलाई । भोलिबाट लकडाउन हुँदै थियो ।
-“चिनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसले विश्वभरि नै माहामारीको रूप लियो । “
-“सरकारले लकडाउन हुने भनेपछि काठमाण्डौँ छोड्नेहरू संख्या बढ्यो । “
-“भारतबाट घर फर्किने मजदूरको संख्या पनि बढ्दो । “
-“आज मात्रै विश्वमा कोरोना भाइरसको कारणले चार हजार मान्छेको मृत्‍यु भएको छ । “
टेलिभिजनमा एक सुन्दर युवतीले यति भन्दै गर्दा बिचमा “साबुन पानीले हात धोओँ, माक्स लगाऔँ ,अनावश्यक रूपमा हिँडडुल नगरौँ, घरभित्रै बसौँ, सुरक्षित रहौँ । “ भनेर जनहितको लागि जारी सन्देश पनि आयो ।
आकाश खुल्ला छ । चराहरू निष्फ्रिक्री उडेका छ्न् । बागमतीको फोहोर ढल पनि रोकिएको छैन, आफ्नै गतिमा बगेको छ । सबै सबै सधैँजस्तो छ तर गाडीमोटरको आवाज शून्य छ । जहाजहरू उडेका छैनन् शहर शान्त छ । मान्छेहरूको भिडभाड कतै देखिँदैन । बेलाबखतमा साइरन बजाउँदै एम्बुलेन्स हुइँकिएको आवाज भने आइरहेको छ । ज्यान बचाउन अब कोठाभित्रै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । मलाई २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा लागेको कर्फ्यूको सम्झना आयो ।
एक दिन दुई दिन, हप्ता दिन हुँदै महिना दिन पुग्यो लक डाउन । अझै पनि रोकिने कुनै छाँटकाट छैन् । कोरोना नियन्त्रण हुनु पर्नेमा झन बढ्दो छ । मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्दो छ । काम नगरेको पनि महिनौं भइसक्यो । केही बचत गरेको पनि सकियो । हामीलाई रोगलेभन्दा भोकले मर्ने डर भएको छ । यस्तो बेला सरसापाट पनि कोसँग माग्नु ? यो बिरानो शहरमा दिने पनि को छ र हाम्रो ? गाउँमा पो सात गाउँ पारिका मान्छेले पनि चिन्छन् यहाँ शहरमा घर जोडिएका मान्छेले चिन्दैनन् । एउटै घरमा ओल्लो पल्लो कोठामा बस्ने मान्छेले समेत चिन्दैनन् । गाउँ र शहरमा यहि त फरक छ ।
दिनभर काम गरेर साँझ छाक टार्नुपर्ने परिवार हाम्रो । यतिबेला संकटमा परेको छ । देशमा कुनैपनि माहामारी आयो भने सबैभन्‍दा पहिले हामी निम्न वर्गलाई नै असर पर्दोरहेछ । भोकले संकटको अवस्था छ भनेर नजान्ने रहेछ । दैनिक काम गर्न मात्र बन्द भएको हो । काम गर्ने दैनिकी रोकिए पनि खाने दैनिकी भने आफ्नै गतिमा अगाडि बढेको थियो ।
उनले चामलको बोरा टकटक्याउँदै चामल सकिएको कुरा सुनाएकी छन् आज । तरकारी पनि सकियो । दाल थोरै छ । ग्यास पनि भर्नु पर्लाजस्तो छ एक दुई दिनमा । परिवारको सबै जिम्मेवारी बोकेको मान्छे भएर होला यतिबेला यी सबै कुरा सुनेर पसिना आएको छ मेरो ।
“यत्रो महिना बितिसक्यो भाडा छ भने दिँदै गर्नु है पछि एकैपटकमा दिन गाह्रो हुन्छ ।”
घरबेटीले हिजै भनेका थिए । मैले उनको कुरा सुनेर पनि नसुनेझैं गर्नु परेको थियो । समाचारले बेलाबेला भाडा छुटको कुरा गर्थ्यो । हुन्छ कि झैं लाग्थ्यो तर त्यो समाचार मात्र भयो । छुटभन्दा पनि बिस्तारै दिनु चाहिँ भने घरबेटीले । मनमा त्रास पनि छ भाडा तिर्न नसक्दा कतिले यस्तो अवस्थामा कोठा नै छोड्नु परेका कुरा हामीले सुन्दै आएका छौँ । कति कुटिएका छन् । कतै त मारीएको कुरा समेत आउन थालेका थिए ।
यी उदाहरणको अगाडि म निरीहले के नै गर्न सक्छु र ? तिर्नुपर्ने हो थाहा छ, आउने स्रोत नभएपछि कसरी तिर्न सकिन्छ र ?
सबै सकिएपछि कोठामा के गरौँ र कसो गरौँ भएको समयमा सरकारले राहत दियो राहतको नाममा जम्मा एक बोरा चामल, एक के जी दाल र एक लिटर तेल थियो । यति भएपनि केही दिनको सास्ती हट्नेमा म विश्वस्त छु ।
दिन बित्दै गए पहिले कोठामा बस्न गाह्रो हुने मलाई अहिले बानी भइसक्यो । घरबेटी बेलाबखत हल्ला नगर्न भन्दै कोठासम्म आइपुग्छन् । पहिले छोरी स्कूल जान्थिन् र हल्ला हुँदैन थियो । सानी छोरी यतिकै पनि हल्ला गर्ने गर्छिन् । बेलाबेला रूने खेल्ने त बालापन नै हो सबैको यो कुरा घरबेटीले बुझिदिए जाती हुने थियो । बुझेर पनि नबुझ्ने मान्छेलाई बुझाउन नसकिने रहेछ ।
शहर शान्त छ तर मन भने बेचैन भएको छ । अभावले भतभती पोलेको छ । मजदूरी गरेर चार पाँच वर्षसम्म खान लगाउन बाहेक केही जोड्न सकेको छैन् । भन्नेहरूले भन्छन् काठमाण्डौँमा बसेको छ, आनन्द छ । तर आफ्नो दु:ख कसलाई थाहा ? मान्छेहरूले सुख खुशी सजिलै थाहा पाउन सक्छन् तर दु:खलाई पहिचान गर्न सकस पर्छ मान्छेलाई । मान्छेको जन्मसँगै अभावको सुरुवात भइदिन्छ कसैलाई धेरै अभाव कसैलाई थोरै अभाव, फरक यतिमात्र हो । दिनभर कमाएर साँझ खानुपर्ने अवस्थामा बाँचेको मान्छेले जसोतसो छोरीलाई बोर्डिङ स्कूलमा पढाएको छु । सपनाहरू ठूला छैनन् हाम्रा, दुई छाक खाना र एकसरो लगाउन पुगे भइहाल्छ ।
लकडाउनले छोरीको टिभी हेर्ने बानी भइसक्यो । एकछिन बत्ती गएहाले उनलाई गाह्रो हुन्छ् । नहेर भन्नलाई पनि अरू कुनै विकल्प पनि छैन । बाहिर घुम्ने अवस्था पनि छैन । सरकारले दिएको एक बोरा चामल, एक लिटर तेल, एक के.जी दाल साँझ बिहान खाँदा एक महिनामै सकियो । सरकारले ५ महिना लकडाउन गरेर एक महिना पनि नपुग्ने खाद्यान्न उपलब्ध गरायो । मान्छेहरू भोकले सडकमा ओर्लिसकेका छन् । सबैभन्दा ठूलो रोगभन्दा पनि भोक रहेछ भन्ने मान्छेहरूले बुझिसेकेका छन् अब । तैपनि मनमा भने त्रास नै थियो । चरा जसरी मान्छेहरू निस्फिक्री उडेर आहार खोज्न सक्ने भइदिएको भए मान्छे आज अभावले मर्ने थिएनन् । भोकले सडकमै देह त्याग गर्ने थिएनन । आजभोलि मजदूरहरू भोकले सडकमै मर्नु परेका समाचार हेडलाइन भएका छन् । गरीबको जीवन भोकको र रोगको शिकार हुने डरबाट ग्रुजिरहेको छ ।
हामीले भोकलाई त खप्न सक्ने थियौँ तर अबोध छोरीलाई भोकै राख्न सकिँदैन थियो । छोरीलाई पाउरोटी र चिया खुवाएर हामीले चिया मात्र पिएर पनि रात कटाउन बाध्य भएका छौँ । यो विवशता थियो । कुनै उपाय थिएन । घरबेटीले पनि भाडाको ताकेता गर्न थालिसकेका थिए तर आफूसँग एक पैसा थिएन । कामकाज सबै बन्द । यस्तो परिस्थीतीमा के गर्न सकिन्छ साह्रै सकस परेको थियो ।
अन्नको एक गेडो छैन । नुन तेल सबै सकिएपछि अब के खाने भन्ने प्रश्नचिह्न हाम्रो अगाडि उभिएको थियो । माँग्न जाऊँ भने कहाँ जाऊँ ? कसले दिन्छ ? किनौभने पैसा छैन । उधारो दिन कसले पत्याउँछ हामीलाई ? विभिन्न संघ संस्थानले खाना खुवाउने कार्य सुरू गरेका थिए । काठमाण्डौँको खुल्ला मञ्चदेखि विभिन्न ठाउँमा खाना खुवाएका कुरा मैले पनि सुनेको थिएँ । घरमा खानलाई केही नभएपछि जानैपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । भोकले लाज नभन्दो रहेछ । लाजभन्दा भोक ठूलो रहेछ । म भोक भोकै बसे पनि श्रीमतीलाई र छोरीलाई भोकभोकै राख्नु भनेको मैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्नु हो लाग्यो मलाई । अनि म खाना बाँडेको ठाउँमा गएँ । सबैले संसार भुलेर, दु:ख भुलेर खाना खाइरहेका थिए । एकपटक सबैका अनुहारमा नजर लगाएर म पनि खाना खाने लाइनमा बसेँ । मैले त्यहाँ खाना खान सकिनँ बरू प्लास्टिकमा पोको पारेँ । केही छोरीको लागि र श्रीमतीको लागि पनि बोकेर कोठामा हिँडे ।
बाटोमा प्रहरीको चेकिङ थियो । कहाँ हिँडेको ?किन हिँडेको लकडाउनको बेला ?उनीहरूको प्रश्न थियो । मैले अभाव र भोकको कुरासँगै हातमा बोकेको प्लास्टिक भित्रको खाना देखाएपछि उनीहरू केही बोलेनन् र म बाटो लागेँ । कोठामा त्यो दिन त्यहि खाना खाएर बितायौँ ।
मान्छेहरू झन धेरै संक्रमित हुँदै थिए । दिनप्रतिदिन मृत्‍यु हुनेको संख्या पनि बढ्दो थियो तर मान्छेले अब बेवास्ता गर्न थालिसकेका थिए किनभने भोकको अगाडि रोगको पनि केही सिप नचल्ने रहेछ । मर्नै परे रोगले नै मरौँ । भोकले मर्न चाहँदैन कुनै मान्छे । खाना बाँड्ने ठाउँबाट ल्याएको खानाले बिहानको छाक टरेको थियो बेलुका के खाने भन्ने पिरले पिरोलिरहेको थियो । त्यसैमा म प्रेसरको पनि बिरामी मान्छे गाह्रो भएको थियो । यतिकैमा म कोठाबाट निस्किएँ । बाटो सुनसान थियो । मैले केही दिन अघि सुनेको थिएँ कतै “कोही रूनु पर्दैन्”, “कोही भोकै बस्नु पर्दैन ” “कोही मर्नु पर्दैन “ भनेर । यतिबेला यी वाक्य कानमा गुञ्जिरहेका छन् । म सरासर बाटोमा हिँडिरहेको थिएँ । हिजो बिहान खाएको खान त्यसैमा प्रेसर भएर होला मलाई रिंगटा चल्यो । आँखा तिरमिर भए । खुट्टा लल्याकलुलुक भए । ओठमुख सुके । म भुइँमा पछारिएँ । फेरि उठेँ तर फेरि पनि पछारिएँ । त्यसपछि म कसरी यहाँ आए ?कसले ल्यायो ? मलाई थाहा छैन ।
उनले आफ्नो कुरा सकि नसक्दा गहभरि आँसु बनाएका छन् । उनलाई मैले बाटोमा अचेत अवस्थामा फेला पारेको थिएँ । त्यसपछि हस्पिटल लिएर आएँ । उनलाई अहिले पनि आफ्नोभन्दा छोरी र श्रीमतीको चिन्ता छ ।
यहाँ भुइँमान्छेहरू भुइँमा नै हराउने रहेछ ।